Posted on janvier 4, 2019 janvier 4, 2019 by collab
Amin’izao fahatongavan’ ny taona vaovao 2019 izao dia faly niarahaba an’ Andriamatoa Jean Brunelle Razafintsiandraofa – Ministry ny Fizahantany, teto Tsimbazaza, anio zoma faha 4 janoary 2019, ireo mpiara-miasa akaiky aminy eto anivon’ny ministera izay tantaniny, notarihan’Andriamatoa Sekretera Jeneraly.
Nirary soa ho an’Andriamatoa Ministra sy ny ankohonany izy ireo, naneho fisaorana tamin’ny fiaraha-miasa nahafinaritra sy ny fahavononana ny hiara-hiasa hatrany . Tsy vitan’izay fa dia mbola nanolotra mari-pahatsiarovana ho azy ihany koa.
Nanolotra fisaorana feno ho an’ireo mpiara-miasa aminy Andriamatoa Ministra narahina firariantsoa, fa miandry zava-baovao ary miandry ny fiantraikany ny asantsika tsirairay avy ny firenentsika sy ny mpiray tanindrazana amintsika. Nanamafy ny tenany fa na inona na inona paikady na programa hapetraky ny fitondrana na ny mpanao politika dia ny teknisiana no mpanatanteraka ary manamboatra ny programa ho azo tsapain-tanana ka ho hisy fiantraikany mivantana ho amin’ny fiaraha-monina sy ny isam-baravarana. Mitaky ekipa mafonja sy mpanorina izany.
Nanamafy ihany koa Andriamatoa Ministra ny amin’ny asa miandry ny tsirairay avy amin’ ity taona ity, ohatra amin’izany ny fametrahana ireo sampandraharaha misahana ny fizahantany eraky ny distrika, ny fahavononana amin’ny fanatanterahana ny fanatsarana ny kalitaon’ny asa amin’ny ankapobeany atolotry ny mpandraharaha malagasy izay misehatra amin’ny fizahantany (toy ny fahadiovana, ny kalitaon’ ny sakafo,..). Mitaky asa goavana izany raha tsy hilaza fotsiny ny amin’ny asa fanentanana miantefa ho an’ny rehetra.
Mbola nofaranan’ Andriamatoa Ministra tamin’ny firariantsoa indray koa izany ary narahina zava-mamy.
Source : MinTour/Holy & Tsila